दिल्ली र हैदरावाद भिड्दै, आज खेल्छन् सन्दीप ? – Nepal News
दिल्ली र हैदरावाद भिड्दै, आज खेल्छन् सन्दीप ?
काठमाडौं, वैशाख २७ । इन्डियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) को ११ औं संस्करणको जारी सिजनमा नेपाली युवा स्पिनर सन्दीप लामिछाने आवद्ध टीम दिल्ली डेयरडेभिल्सले आज बलियो टोली सनराइजर्स हैदरावादसँग खेल्दै छ ।
अहिलेसम्म खेलका ९ मध्ये तीनमा जित र ६ खेलमा हार व्याहोरेर तालिकाको पुच्छारमा रहेको दिल्लीले सिजनको बलियो टीम सनराइजर्स हैदरावादसँग आज भिड्न लागेको हो । युवा व्याट्सम्यान श्रेयस आयरले कप्तानी सम्भालेपछि दिल्लीले दुई खेलमा जित हात पारे पनि टीमले उल्लेख्य सुधार गर्न भने सकेको छैन ।
दिल्लीले ९ खेलबाट ६ अंक जोडेको छ। भने हैदरावाद ९ खेलबाट १४ अंक जोडेको छ।
बिहीबार राति दिल्लीको घरेलु मैदान फिरोज शाह कोट्ला रंगशालामा राति ८ बजे शुरु हुने खेलमा दुबै टिम जितका लागि मैदानमा उत्रिने छ । दिल्ली आज जित निकालेर आफ्नो अगाडिको यात्राका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न चाहान्छ भने हैदारवाद आजको खेल जित्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिन चाहान्छ ।
कप्तानी सम्भालेपछि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै दुई खेलमा जित निकालेका आयरलाई बलियो टीम सनराइजर्सलाई घरेल मैदानमा पराजित गरी दिल्लीलाई पूनर्जीवन दिन उद्दत रहने छन् भने सनराइजर्सका कप्तान काने विलियम्सन भने टीमलाई शीर्षस्थानमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ मैदानमा उत्रिने छन् ।
कप्तान श्रेयर अयार, रिशव पन्त, पृथ्वी शा, ट्रेन्ट बोउल्ट र अमित मिश्र उत्कृष्ट फर्ममा रहे पनि टीमको हारलाई भने बचाउन सकेका छैनन् ।
तर आइपीएल अक्सनबाट दिल्लीमा ३२ लाख रुपैयाँमा अनुबन्ध हुन सफल पहिलो नेपाली क्रिकेटर सन्दीप भने आजसम्म टीमले खेलका ९ खेलमा खेल्न पाएका छैनन् ।
प्रशिक्षक रिकी पोन्टिङ र यसअघिका कप्तान गौतम गाम्भीर दुबैले सन्दीपको खेलको प्रंशसा गरेपनि उनी अहिलेसम्म दिल्लीको प्लेइङ एलेभनमा परेका छैनन् ।
किन प्लेइङ एलेभनमा परेका छैनन् सन्दीप
आइपीएलको नियम अनुसार एउटा खेलमा कुनैपनि टीमले चार जनामात्रै विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउँछ । दिल्लीमा मात्रै आठ जना विदेशी खेलाडी छन् । त्यसमा सबै सन्दीप भन्दा अनुभवी र पाका खेलाडी छन् । साथै मंहगा पनि ।
गौतम गाम्भीरले कप्तानी गर्दासम्म शुरुबाटै दिल्ली जारी सिजनमा दवावमा रह्यो । पाँच खेलमध्ये चारमा पराजय हात पारेको टिमले सन्दीलाई खेलाएर थप रिक्स लिन नचाहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
अब दिल्लीले चार खेल खेल्न वाँकी छ । सबै खेलमा जित चमात्कारी रुपमा सबै खेलमा जित निकाले मात्रै दिल्लीको अगाडिको यात्रा सम्भव छ । प्लेअफ र क्वालिफायरका लागि दिल्ली बाँकी सबै खेल जित्नु पर्छ । होइन भने आइपीएल इतिहासमा दिल्लीको यो सबैभन्दा नराम्रो हार हुने छ ।
श्रेयस अयार (कप्तान), पृथ्वी शा, रिशव पन्त, ग्यालेन म्याक्सवेल, विजय शंकर, लियम प्युन्केट,अमित मिश्र, नमन ओझा, ड्यानियल किस्ट्रिन, अभेस खान र ट्रेन्ट बोल्ट
ट्याग्स: IPL, दिल्ली डेयरडेभिल्स्, सनराइजर्स हैदरावाद